နေအိမ် / အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့် / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်ပြည်နယ်အရေးပေါ်ခုံသမာဓိဆုချီးမြှင့်ဘက်တော်သား
06/07/2015 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
တစ်ခုကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်ပြည်နယ်အရေးပေါ်ခုံသမာဓိရုံးဆုယူကရိန်းအတွက်ပြည်တွင်းတရားရုံးကပြဌာန်းခဲ့သည်, ကနဦးကအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်အဖြစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဆန်းစစ်ခြင်း. ကပြည်နယ်ဆန့်ကျင်အရေးပေါ်ခုံသမာဓိရုံးဆု၏ပထမဆုံးလူသိများဘက်တော်သားဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်.
အရေးပေါ်ခုံသမာဓိရုံးဆုတစ်ခုခုံသမာဓိခုံရုံးအပေါ် Non-binding နေကြတယ်, တစ်ဆုချီးမြှင့်ပြန်ဆိုသည်အထိပေမယ့်အရပ်ဌာန၌တည်နေကြ, ပါတီမှအပိုဆောင်းအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်သက်သာနောက်ထပ်အရေးတကြီးအတိုင်းအတာပေးနိုင်ရန်အတွက်.
အဆိုပါအထူးအရေးပေါ်ခုံသမာဓိရုံးဆု၏အခြေခံပေါ်မှာပြန်ဆိုခဲ့သည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းအနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ၏စတော့ဟုမ်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း, အဘယ်သူ၏နောက်ဆက်တွဲ II ကိုအရေးပေါ်ခုံသမာဓိရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့ကိုထောက်ပံ့ပေး:
ဆောင်းပါး 1 အရေးပေါ်ခုံသမာဓိ
(1) အမှုအညီအပိုဒ်တစ်ခုအနုညာတခုံရုံးရည်ညွှန်းထားသည်သည်အထိတစ်ဦးကပါတီတစ်ခုအရေးပေါ်ခုံသမာဓိ၏ရက်ချိန်းများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် 18 အဆိုပါအနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ၏. (2) အရေးပေါ်ခုံသမာဓိ၏တန်ခိုးသူတို့အားပုဒ်မထွက်သတ်မှတ်ထားခံရကြလိမ့်မည် 32 (1)-(3) အဆိုပါအနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ၏. အမှုအညီအပိုဒ်တစ်ခုအနုညာတခုံရုံးရည်ညွှန်းထားပြီးသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရပ်ဆိုင်း 18 အဆိုပါအနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများသို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာအရေးပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ်အရသိရသည် binding ခံရဖို့တာတွေရပ်စဲ၏9(4) ဒီနောက်ဆက်တွဲ၏.
အရေးပေါ်ခုံသမာဓိရုံးဆုကိယက်ဗ်၏ Pechersk ခရိုင်တရားရုံးတို့ကယူဆောင်ခဲ့သည်, ကုမ္ပဏီ JKX ရေနံအားဖြင့်လျှောက်လွှာအပေါ်သို့ & ယူကရိန်းဆန့်ကျင်ဓာတ်ငွေ့နှင့်၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများနှစ်ခု. အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ခွဲများ '' ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်တစ်ဦးအချို့သောရာခိုင်နှုန်းကျော်အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson ပြုရန်တွန်းအားပေးရပ်တန့်ဖို့ယူကရိန်းအမိန့်ထုတ်.
ဒါဟာယူကရိန်းအရေးပေါ်ခုံသမာဓိရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပြီးအစားပြည်တွင်းတရားရုံးများအတွက်၎င်း၏ဘက်တော်သားခုခံတွန်းလှန်ရန်ကြိုးစားဖို့ရွေးချယ်မပုံပေါ်, ၎င်း၏အမှုတင်ပြမလျော်ကန်သောအကြောင်းကြားစာများနှင့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုငြင်းပယ်စောဒကတက်ဘယ်မှာ, အဖြစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးပဋိညာဉ်စာတမ်းစာချုပ်အောက်ရှိအေး-ချွတ်ကာလလေးစားမခံခဲ့ရကြောင်းငြင်းခုံခြင်းနှင့်အများပြည်သူမူဝါဒကကန့်ကွက်ပြုစုပျိုးထောင်.
ယူကရိနျးတရားသူကြီးယူကရိန်းလျော်သောအသိပေးစာနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏မျက်နှာသာတှငျတှေ့တွေ့ရှိခဲ့. ဒီနိမ့်တရားရုံးတွင်စီရင်လေးစားမှုနှင့်အတူရာအရပ်ကိုယူသောရပ်ဆိုင်းမှုအယူခံဝင်ရှိစဉ်အခါ, ဒေသခံတရားရုံးများသူတို့အခြေစိုက်ရာနိုင်ငံဆန့်ကျင်ဆုပြဋ္ဌာန်းရန်ရန်အဘို့အခက်ခဲနိုင်ပါတယ်, အရာယူကရိန်းရဲ့တရားစီရင်ရေး၏လွတ်လပ်ရေး၏မြင့်မားပြောတတ်.
– ဝီလျံ Kirtley
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အရေးပေါ်ခုံသမာဓိ, စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနပဋိညာဉ်စာတမ်းစာချုပ်, အနုညာတစီရင်ဆုကို၏ဘက်တော်သား, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး, ယူကရိန်းအနုညာတစီရင်, ဝီလျံ Kirtley